Dani Carvajal oo niyad jab ku riday Cristiano Ronaldo kadib markii uu doortay laacibkii ugu fiicnaa taariikhda kooxda Real Madrid – Gool FM
Dani Carvajal oo niyad jab ku riday Cristiano Ronaldo kadib markii uu doortay laacibkii ugu fiicnaa taariikhda kooxda Real Madrid
(Real Madrid) 25 Luulyo 2018. Daafaca kooxda Real Madrid Dani Carvajal ayaa ka careysiiyay saaxiibkiisii hore ee Cristiano Ronaldo kadib markii uu doortay ciyaaryahankii ugu fiicnaa taariikhda Los Blancos.
Ronaldo ayaa jabiyay rikoorkii taariikhiga ahaa ee gool dhalinta Raúl González, wuxuuna sidaas ku noqday gool dhaliyaha ugu sareeya taariikhda kooxda Real Madrid, kadib markii uu dhaliyay 450 gool, halka goolasha Los Blancos ee Raúl ay ku istaageen 323 gool.
Laakiin sidaas oo ay tahay Dani Carvajal ayaan wali u arkin Cristiano Ronaldo inuu yahay kan ugu fiicanaa ee xirtay maaliyada Real Madrid ee taariikhda.
Dani Carvajal ayaa si cad u sheegay in uu u arko laacibkii ugu fiicnaa taariikhda ee soo mara kooxda Real Madrid inuu yahay Raúl González.
“Raul waa ciyaaryahan ka soo baxay akaadiimayada kooxda, waxaana uu sameeyay shaqo iyo dadaal badan”.
“Ma uusan ahayn ciyaaryahanka ugu dhaqsida badan, ama kan ugu fiican ee kubada maamula, ama ku wanaagsan dhanka badaxa, lakiin wuxuu sameeyay shaqo fiican”.
“Leicester City iyo Brighton way naga fiican yihiin”…. Jose Mourinho oo la kaftamay Jamaahiirta kooxda Man United